CANAB "HAROLD": SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIRO, QEEXAAD, CAYAYAANKA - BEERTA
Kala duwan oo u qalma meel kasta oo fidsan - Harold Hargein
Mar dhow, bannaanka u ah duufaan iyo waqooyiga waddanka oo leh erayga "beertii canabka ah" waxay murugsanaan kartaa oo keliya.
Iyo runtii: noocyo badan, xitaa muuqda aan qabyo ahayn, waxay ka baqayaan cimilada qabow iyo dhaxan. Kalluumaysatadu waxay heleen hab ay ku farxaan beeralayda waqooyiga.
Harold canab wuxuu si fudud u dulqaadan karaa heerkulka hoose, mana u baahnayn is-daryeelid aad u adag.
Harold waa nooc isku dhafan oo canab ah oo madoow ah. Xoogaa hore u sareeya. Waxay ku dhacdaa qiyaastii boqol maalmood, marka goosashada la goosto dhamaadka bisha Luulyo iyo bilowgii bisha Agoosto, laakiin dadka guriga jecel ee khamriga ah ayaa badanaa ka baxsan si loo dhigo ilaa Sebtembar, sidaas darteed waxaa jira sonkor badan.
Waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo isku dhafan oo kala ah Timur, Bazhena iyo Muscat Delight.
Berry wuxuu ilaaliyaa soo bandhiga iyo dhadhamin, xitaa inta lagu jiro kaydinta muddada dheer ama gaadiidka, ha jabin ama sii xumayn.
Waxaa si weyn loo jecel yahay winemaking qayb ka mid ah bucshirta miiska madoow cad iyo macmacaanka, sidoo kale loo isticmaalo macmacaanka iyo cusub.
Harold Grapes: sharaxaad kala duwan
Kuurku waa mid aad u firfircoon. Kooxdu waxay leedahay qaab cylindrical-qalab-qaabeeya, cufan, oo aan lahayn polos, miisaanka celceliska - 500-600 g.
Maaha mid u nugul yaanyo sidoo kale Julian, Lancelot iyo Zagrava.
Ubaxa - Hermaphrodites. Berry midab leh, oo leh calaamad fiiqan, midab-bilo ah, ka sarreeya celceliska celceliska (miisaanka celceliska 6 g). Maqaarku waa cufan, dhumuc dhexe.
Laalaabka oo casiir leh, cufan, aan aad u liidan, laakiin aad u macaan iyo hodan ah oo taajir ah (dhirta iyo qoraalada strawberry).
Vine brown dhalaalaya, awood leh, dabacsan. Leaves dhalaalaya oo cagaaran, dhexdhexaad ah, wadne-qaabeeya. Caleemaha Young waa cagaaran iftiin, qumman - brown oo midab leh oo leh casaan casri ah.
Fiiri sawirrada canab Cinab:
Waxaa la helay iyadoo la marayo dhexjeeda noocyo kala duwan Arkady iyo Delight oo kala duwan xagaaga Muscat kala duwan ee VNIIViV iyaga. Potapenko (Novocherkassk).
Meelaha leh jawi diirimaad leh oo khafiif ah, ugu caansan, tan iyo markii su'aasha hoyga aysan xataa u qalmin. Sida laga soo xigtey caleemaha, dhulalka Siberian iyo Ural waxay sidoo kale ku haboon yihiin Harold, laakiin caabbinta barafka ee noocyada kala duwan ayaa iminka lagu baarayaa.
Ka mid ah noocyo aad u qabow u adkaysta yihiin Super Extra, Beauty of North iyo Tukay.
Marka la eego xogta hordhaca ah, noocyada kala duwan waxay u dhigantaa barafoobid - illaa -25-26 digrii. Bareetada, kalluunka casaanka, caarada, xabuubka budada (oidium iyo caarada) sidoo kale ma baqayaan. Caleemaha waxay ku rusheeyeen dherer dhan.
Waxay leedahay dhadhan taajir ah oo qani ah oo leh warqad aan caadi ahayn. Kaararka Harold waa mid aad u qaali ah - waxay ka kooban tahay 15 kilo oo ah berry ka soo deyn ah.
By noocyada Muscat waxaa ka mid ah: Ruta, Muscat Delight iyo Muscat Hamburg.
Waxay u egtahay in ay ka buuxsamayso miraha, sidaas darteed waxay u baahan tahay diirada oo ay caleemaha iyo burooyinkeeda. Heerka indhaha - ugu badnaan 35 qashin.
Xaaladaha ciidda ma ahan kuwo furfuran - waxay u dulqaadaneysaa labada abaar ee fudud iyo qoyaan. Heerka sonkorta ayaa fiican - qiyaastii 20%, kiimiko - qiyaastii 5 g / tobobar dm.
Sida laga soo xigtay beeralayda qaarkoodHarold, canab, ka cabsashada dhalidda guga, oo ku yaal dhul-beereed la yiraahdo "minuses" waxay u baahan tahay hoy qasab ah. Wuxuu u baahan yahay waraabin caadi ah - laga bilaabo Abriil ilaa Oktoobar.
Resistance of noocyada kala duwan si kareemka cawska iyo caarada budada ah wanaagsan, laakiin weli kuma filna inay ka hortagaan ka hortagga. Sidoo kale waxay khuseysaa cudurada sida bakteeriyada, anthracnose, chlorosis, rubella iyo kansarka bakteeriyada. Ogeysiin macnaheedu waa hub. Ogaanshaha calaamadaha iyo hababka looga hortagi karo, waad ilaalin kartaa dhirtaada.
Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo duurka ka hor bilowga ubax leh fooxfureed-fungicides ama xal hal boqolkiiba ah ee Bordeaux isku dar ah.
Cayayaanka iyo caarada caarada Harold ma baqdo, laakiin shimbiraha - xataa sida. Laga soo bilaabo afarta afartan iyo xiniinyaha ayaa badbaadin doona mesh adag oo adag.
Waa inaan qaadnaa tallaabooyin wax looga qabanayo farabadan ee Baalallay - Harold, nasiib daro, waa mid ka mid ah "jecel". Waxaa intaa dheer, tani waxay quseysaa baalalooyinka iyo baalaliyaal labadoodaba.
Haddii aadan wax talaabo ah qaadin - wax kasta oo uu arko, iyo inflorescence, iyo caleemaha yaryar, iyo ugxan iyo dhoobo. Oo waa in la sheegaa in berry "tijaabiyay" buug-yarahaan isla markiiba uu noqon doono "bartilmaameed" kalluun quraaradda.
Sida qiyaas ka hortag ah, waxaa lagama maarmaan ah in laga xoroobo rugta shaqada ee xad-dhaafka ah - si ay u qaadaan kore iyo caleemaha, si ay u siiyaan rucubyo leh hawo wanaagsan.
Waxaa wanaagsan in aad isticmaashid sunta cayayaanka ee ka soo horjeeda caleenta: Karate Zeon, BI-58, Kinmiks, Arrivo, Benzophosphate, Sumi-Alfa, Apollo, Carbotsin, Talstar, Zolon, Anometrin, Sherpa.
Sida canab ah - lagu buufiyay saddex marxaladood. Marka ugu horeysa waa 2 toddobaad kadib markii bilowga jiilalka kowaad ee bilawga ah (bilaha 4aad-5aad). Midka labaad - bilowga hore ee ubax. Saddexaad - toban ilaa shan iyo toban maalmood ka dib jiilka labaad ayaa duulaya (dhammaadkii Juun - bilowgii July).
Caleemaha canabka ah wuxuu lime karaa, rusheeyaa beerta canabka ah laba marxaladood. Marka hore waa bilowga bararka kalyaha, tan labaad - ka dib markii la kala diro.
Canabka Harold waa door wanaagsan oo loogu talagalay beeralayda koonfurta iyo bartamaha Ruushka. Halkee "jiilaalka dhabta ah ee Ruushka ah" waa la dareemayaa, baadiyaha waa in la daboolo xilliga jiilaalka. Waxay ku farxi doontaa dalagyo badan oo miisaan leh, oo kaliya uma baahnid inaad caajisaan, ka ilaali dhaxan iyo cadowga, sida shimbiraha iyo siiyay.